“Siddeed kooxood ayaa u tartamaya hanashada horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan” – Klopp – Gool FM
(Liverpool) 20 Nof 2020. Tababaraha kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa filaya tartan xiiso badan xilli ciyaareedkan, si loogu guuleysto horyaalka Premier League.
Jürgen Klopp ayaa dhinaca kale tilmaamay inay jiraan Siddeed kooxood ee ku tartami doona hanashada horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan.
Waxay u muuqataa in xili cayaareedkan Premier League uu noqon doono mid xiiso badan, iyadoo Leicester City ay hoggaamineyso kaddib siddeed kulan ay ka ciyaartay horyaalka oo ay uruursatay 18 dhibcood, waxayna hal dhibic ka sareeyaan kooxaha Tottenham iyo Liverpool.
Farqiga u dhexeeya hogaamiyaasha horyaalka ee Leicester City iyo kooxda kaalinta 13-aad ee Newcastle United waa kaliya todobo dhibcood, taasoo xaqiijineysa inaan wajaheyno xilli ciyaareed aan caadi aheyn Premier League.
Kooxda Liverpool ayaa ku martigalin doonta garoonkeeda Anfield naadiga Leicester City, Axada soo socota, taasoo noqon doonta ciyaarta ugu xiisaha badan ee kulamada Isbuuca 9-aad horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Daily Mail” ee dalka England Jürgen Klopp ayaa wareysi uu bixiyay kahor kulanka Leicester City wuxuu ku sheegay:
“Halganka loogu jiro horyaalka? Waxaan u maleynayaa inay jiraan 8 kooxood oo u dagaalamaya horyaalka xilli ciyaareedkan.”
Jürgen Klopp oo hadalkiisa sii wata aayaa wuxuu yiri: “Aniga ahaan, wax dhibaato ah kuma qabno arrintaas, waxaan diyaar u ahay inaan la tartamo kooxaha kale ee horyaalka, waana arki doonaa waxa dhaca”.